Department >> Opening Deparment
မြန်မာ့နိုင်ငံခြား ကုန်သွယ်မှုဘဏ်တွင် ဖွင့်လှစ်နိုင်သော စာရင်းအမျိုးအစား
နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းဖွင့်နိုင်သည့် နိုင်ငံခြားငွေ အမျိုးအစား
မြန်မာနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်တွင် စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားရှိသော စာရင်းအမျိုးအစားများ
နိုင်ငံခြားသားများ ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ပါက တင်ပြရန်လိုအပ်ချက်များ
သံရုံးနှင့် သံရုံးဝန်ထမ်းများ၏ စာရင်းများ
Fund Transfer Application/Draft Order Form
Invoice/ Firm Order/ Sale Contract
ချက်လက်မှတ်မူရင်း/မိတ္တူ(သို့မဟုတ်)ငွေသားဖြင့်ထုတ်ယူပါက သက်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုသူ၏လက်မှတ်နှင့် အကြောင်းကြားစာ
ပြည်ပခရီးသွားခြင်းအတွက် US$ 100 လဲလှယ်ရန်လိုအပ်ချက်များ
ထွက်ခွာခွင့်ပုံစံ( မူရင်း ၊ မိတ္တူ )
လေယာဉ်လက်မှတ်( မူရင်း ၊ မိတ္တူ )
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်( မူရင်း ၊ မိတ္တူ )
ပြည်ပသို့ခရီးသွားခြင်းအတွက် ကုမ္ပဏီ/ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်စာရင်းမှ US$ ထုတ်ယူရန် လိုအပ်ချက် များ
နိုင်ငံခြားငွေမှတ်တမ်းစာအုပ်( မူရင်း ၊ မိတ္တူ )
MFTB WORKER’S REMITTANCE
- မြန်မာနိုင်ငံမှ စင်္ကာပူနိုင်ငံသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများအနေဖြင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံ တွင် ရရှိသည့် မိမိ၏လစာငွေကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ မိမိ၏မိသားစုဝင်များ၊ဆွေမျိုးများသို့ လွှဲပို့ရန် အတွက်အခက်အခဲ ဖြစ်နေပါသလား ?
- တရားမဝင်ဟွန်ဒီလမ်းကြောင်းနှင့် ပို့သည့်အခါ စရိတ်ထောင်း၍ လုံခြုံစိတ်ချရမှုမရှိသည် ကို စိုးရိမ်နေပါသလား?
- ဟွန်ဒီတွေ ပိတ်တော့မည်ကြား၍ ငွေပို့မရမည်ကို ပူပန်နေပါသလား ?
- MFTB မှ စင်္ကာပူနိုင်ငံရောက် မြန်မာများ မိမိတို့ လုပ်ခလစာကို လုံခြုံစိတ်ချရမှု အရှိဆုံး ၊ ကုန်ကျစရိတ် အနည်းဆုံးဖြင့် လွှဲပို့ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုကို စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ DBS Bank, DBS Bill Payment Service On-Line Banking System ဖြင့်ချိတ်ဆက်ပြီး ဆောင် ရွက်ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုအသစ်ကို ရယူနိုင်ပါပြီ။
DBS ON-LINE BANKING ဖြင့် ငွေလွှဲပို့နိုင်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ
- စင်္ကာပူနိုင်ငံသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့်သူနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငွေထုတ်ယူမည့် ကိုယ်စားလှယ်တို့မှ မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်တွင် ပူးတွဲနိုင်ငံခြားငွေစာရင်းနှင့် ကျပ်ငွေစာ ရင်း / MPU ကျပ်ငွေစာရင်းတို့ကို ဖွင့်လှစ်သွားရပါမည်။
- စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်သူမှ စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ DBS Bank တွင် စင်္ကာပူဒေါ်လာငွေ စာရင်းကို ဖွင့်ထားရပါမည်။
- ငွေလွှဲပို့သည့်အခါ Mobile Banking (သို့မဟုတ်) Internet Banking မှ DBS IDEAL Application ကို အသုံးပြုရပါမည်။
- အများဆုံးစင်္ကာပူဒေါ်လာ ၅၀၀၀/- အထိ လွှဲပို့နိုင်ပါမည်။
- DBS Bill Payment Service Mobile Banking (သို့မဟုတ်) Internet Banking ဝန်ဆောင်မှုကို နေ့စဉ် ၂၄ နာရီအပြည့် ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
- Online မှ ငွေလွှဲပို့ပြီးပါက လွှဲပို့ငွေသည် နောက်တစ်နေ့တွင် MFTB သို့ရောက်ရှိ ပါမည်။ ထိုအချိန်တွင် MFTB သည် ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးဖြင့် မြန်မာကျပ်ငွေကို သက်ဆိုင်ရာ ကျပ်ငွေစာရင်း၊ MPU ကျပ်ငွေစာရင်းသို့ ထည့်သွင်းပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံရှိ သက်ဆိုင်ရာ ငွေထုတ်ယူမည့်သူသည် နီးစပ်ရာ ATM စက်များတွင် မြန်မာကျပ်ငွေကို ထုတ်ယူနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
MFTB Daily Exchange Rate သိရှိရန်
- နေ့စဉ်သတ်မှတ်သည့် ငွေလဲလှယ်နှုန်းကို MFTB ၏ wetsite (http://www.mmftb.com) သို့ဝင် ရောက်၍ နေ့စဉ်တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး လွယ်ကူစွာ Download ရယူနိုင်ပါသည်။
- ငွေလက်ခံမည့်သူသည် မြန်မာကျပ်ငွေ ငွေသားဖြင့် ထုတ်ယူလိုပါက ဘဏ်ဖွင့်ရက်၊ ဘဏ်ဖွင့် ချိန်အတွင်း MFTB ၌ ချက်ချင်းထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
- ATM Card Account ဖွင့်လှစ်ထားပြီး မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်၏ATM စက် များတွင်လည်းကောင်း၊ MPU Card ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည့် ပြည်တွင်း တိုင်းနှင့် ပြည်နယ် အသီးသီးရှိ နိုင်ငံပိုင်နှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဘဏ်များ၏ ATM စက်များတွင် လည်းကောင်း၊ မိမိအလိုရှိသည့်အချိန်တွင် လိုအပ်သည့်ငွေပမာဏကို မြန်မာကျပ်ငွေ ငွေသားဖြင့် အချိန်မရွေး ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
- လွှဲပို့ငွေနှင့်ညီမျှသည့် မြန်မာကျပ်ငွေကို အခြားပြည်တွင်းဘဏ်များတွင် ဖွင့်လှစ် ထားသည့် မြန်မာကျပ်ငွေစာရင်းသို့ လွှဲပြောင်းလက်ခံလိုပါက လွှဲပြောင်းပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
- လောလောဆယ်တွင် စင်္ကာပူရောက် မြန်မာအလုပ်သမားများအတွက် အထူးအစီအစဉ် အဖြစ် အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု ပေးပါမည်။
- စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာနိုင်ငံသား အလုပ်သမားများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ငွေလွှဲပို့ရာ တွင် စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ ဘဏ်တစ်ခုခုသို့ ဘဏ်ဖွင့်ရက်၊ ဘဏ်ဖွင့်ချိန်အတွင်းသွားရောက်၍ ငွေလွှဲကိစ္စ ရပ်များ ဆောင်ရွက်ရန်မလိုဘဲ ၊ DBS Bank ၏ Mobile Banking (သို့မဟုတ်) Internet Banking မှတဆင့်(၂၄)နာရီ မိမိအားလပ်သည့်အချိန်တွင် ငွေလွှဲကိစ် စဆောင်ရွက်နိုင်ပါမည်။
- ပြင်ပငွေလွှဲအေးဂျင့်များမှတဆင့် ဟွန်ဒီနှင့် ငွေလွှဲခြင်းအတွက် ငွေလွှဲအေးဂျင့်များထံ သွားရမည့် အချိန်ကုန်ခြင်း၊လူပင်ပန်းခြင်းတို့ကို သက်သာစေပါမည်။
- စင်္ကာပူမှမြန်မာနိုင်ငံသို့ ငွေလွှဲပေးပို့ရာတွင် ဟွန်ဒီအစားဘဏ်များကို အသုံးပြု၍ လွှဲပို့ခြင်းဖြစ်သဖြင့် ငွေလွှဲခြင်းအတွက် လုံခြုံမှုရှိခြင်း၊ စိတ်ချယုံကြည်မှု ပိုမိုရရှိခြင်း၊ ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှု အန္တရာယ်လုံးဝမရှိခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်ပါသည်။
- DBS S’poreနှင့် MFTB အကြား ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသည် ဘဏ်အချင်းချင်း သီး ခြားသဘောတူညီချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးမည့် အထူးငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသဖြင့် စင်္ကာပူ တွင် ငွေလွှဲပို့သူအနေဖြင့် ဘဏ်စရိတ် စင်္ကာပူဒေါ်လာ (၅) ဒေါ်လာကုန်ကျရုံဖြင့် ငွေလွှဲပို့ နိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ ငွေလက်ခံသူအနေဖြင့် ပုံမှန်ငွေလွှဲအဝင်စရိတ်Inward Remittance Charges USD 15/- ကိုထပ်မံပေးဆောင်ရခြင်းမရှိဘဲ သက်သာသောဝန်ဆောင်မှုကို ရရှိ မည်ဖြစ်ပါသည်။
- ဤအစီအစဉ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် လွှဲပို့ငွေအတွက် စုစုပေါင်းငွေလွှဲစရိတ်များစွာ သက်သာစေပါမည်။
Now Available , Please Contact
- Office –DBS Bank Ltd, Singapore , 12, Marina Boulevard, Level 44 ,DBS Asia Central @ Marina Bay ,Financial Centre Tower3, Singapore 01 89 82
- Website – www.dbs.com , Business Care – 1800 260 8080 , 65 6260 8080
- Office –Myanma Foreign Trade Bank , No.80-86,Mahabandoola Garden St, Kyauktada Township , Yangon ,Myanmar
- Phone – 95-01-375324(Office Hours) ,– 95-01-385034 Fax–95-01-254586 ,
- Hot Line – 95-01-380616 (24/7) , Email – mftbygn1@myanmar.com.mm ,
- Website – www.mmftb.com.mm